भावी प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सवाल
बालकृष्ण मैनाली अहिले भावी प्रधानन्यायाधीश को हुने भन्ने बारेमा चर्चा–परिचर्चा शुरु भएको छ। यो चर्चा पनि दुई विषयमा केन्द्रित रहेको छ। वर्तमान प्रधानन्यायाधीश अवकाशप्राप्त हुनु एक महिनाअगाडि नै संवैधानिक परिषद्ले
को भन्दा को कम ?
कृष्ण प्रजापति निर्वाचन, चुनाव, मतदान र प्रतिस्पर्धाका लागि हरेक बखत कोभन्दा को कम भन्ने भावना अगाडि आउनु राम्रो पक्ष हो। समग्रमा देश निर्वाचनमा गइसकेको अवस्था छ। यो बेला राजनीतिक पार्टीहरुबीच
गणतन्त्रमा वैचारिक वरणी
रामप्रसाद गौतम नेपालका अधिकांश जनता कुनै एक पार्टीको समर्थक भनेर पहिल्यै चिनिएको अवस्था छ। यसरी पछि कुनै लाभका पद पाउने अशा वा पार्टीगत संरक्षण पाउनको लागि कुनै राजनीतिक दलको नजिक
काम कुरो एकातिर राज्यको ध्यान “हर्न”तिर
सुशील देवकोटा बैशाख १ गतेदेखि हाम्रो देशमा सवारीसाधनले हर्न बजाउन नपाउने नियम लागु गरियो। यो एकदम राम्रो नियम हो। विश्वका धेरै विकसित मुलुकमा यस्तो नियम बनाइएको छ। झन् हाम्रो राजधानीमा
भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा सुशासनको खाँचो
प्रदीप उप्रेती मुलुकको अर्थिक विकासका लागि भ्रष्टाचार निर्मूल गर्नुपर्ने देखिन्छ। विश्वका कैयौं यस्ता मुलुक छन् त्यहाँ भ्रष्टाचारलाई निक्कै ठूलो अपराधको रुपमा लिइन्छ। सो गरेबापत मृत्युदण्डजस्तो मानवताविरोधी कठोर सजायको व्यवस्था गर्दासमेत
योगेन्द्र चौलागाईं नेपाली समाजको परापूर्व कालदेखि नै चल्दै आएको सापटी, पर्म, ढुकुटी, गुठी आदि व्यवस्थालाई विधिवत र संस्थागतरूपमा सञ्चालन गरिएको संस्था नै अहिलेको सहकारी संस्था हो। सहकारी संस्था संयुक्त स्वामित्व
बदलिन नचाहने परम्परा
रमेश केशरी वैद्य अविकसित मुलुक भनौं भने सानो मुलुक भएर पनि अपार धन छ यहाँ, जसको कुनै सदुपयोग भएको छैन। यदि प्रयोग भएको भए ठूला उद्योगहरुको विकास हुन्थ्यो होला, विदेशिएका
स्थानीय निर्वाचनमा महिला नेतृत्व
पविता मुडभरी पुडासैनी राजनीतिक दलहरुले मेयर–उपमेयर तथा प्रमुख–उपप्रमुख पदमा नेतृत्व दाबी गर्न सक्ने गरी आ–आफ्ना दलका महिलालाई सक्षम बनाउन सकेका छैनन्। महिलामाथि राजनीतिक विश्वास कम भएको हाम्रो मुलुकमा महिलाले जितेर
राष्ट्रिय कृषि नीति कार्यान्वयनको सवाल
ढुनबहादुर बुढाथोकी नेपालमा ६६ प्रतिशत मानिस अहिले पनि कृषि पेसामा संलग्न छन्। दुई तिहाइ श्रमशक्ति कृषि पेसामा संलग्न भईकन पनि जीडीपीमा कृषिको योगदान न्यून छ। ०७२।७३ मा जीडीपीमा ३१.६९ प्रतिशत
निर्वाचन आचारसंहिता पालनमा आशंका
ज्ञानमणी नेपाल कालोटोपी जति–जति स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै गरेको छ त्यति नै दलह्रूप्रति अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि बढेको देखिएको छ। २० वर्षपछि हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा एकातिर नागरिकको चासो पनि
निर्वाचन उपयोग नै विवेकपूर्ण कदम
बद्री तिवारी मधेसवादी दलह्रूले बुझ्नै पर्ने कुरा के हो भने, तराई–मधेसमा आफ्नो मात्रै बाहुल्यता छैन, त्यहाँनेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्रलगायत अन्य दलह्रूको पनि वर्चश्व छ भन्ने कुरा संसद्मा
भक्तपुरमा बिस्केट जात्राको रौनक
पुष्कर बुढाथोकी भक्तपुरमा प्रसिद्ध बिस्केट जात्रा शुरु भएको छ। जात्राको शुरुआतसँगै यहाँको रौनकमा स्थानीयवासी झुम्न थालेका छन् तर सुरक्षाको चिन्ता पनि उत्तिकै छ। यो जात्रा नयाँ वर्षको चार दिनअगाडिदेखि पाँच
स्थानीय तहमा महिला सक्षमताको प्रश्न
बिन्दु अधिकारी ढकाल विगत निकै लामो समय झन्डै १९ वर्ष स्थानीय निकायहरू जनप्रतिनिधिविहीन रहँदा अनेकौं कष्ट खेपिरहेका र बेथितिको सामना गरिरहेका आमनागरिक अब हुने स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणाले हर्षित भएका
महिला नेतृत्व अझै चुनौतीमै
कपिल काफ्ले लैङ्गिक तथा सामाजिक सहभागितालाई लोकतन्त्रको आधार बनाउने र महिला नेतृत्व प्रवद्र्धन गर्ने दललाई नै व्यावहारिक रूपमा मतदाताले मनपराउने निश्चित छ। त्यसैले राजनीतिक दलले औपचारिकताका लागि मात्र ४० प्रतिशत
विकास र समावेशिताको बहस
नरेन्द्र केसी मुलुक स्थानीय तह चुनावको तयारीमा जुटेको छ। राजनीतिक दलहरुलाई सबैभन्दा धेरै चुनाव लाग्नु स्वाभाविक छ। लगातार बीस वर्षदेखि स्थानीय चुनाव नहुनु र अहिले राज्य पुनर्संरचनापछि राज्यको एउटा तहकै
स्थानीय चुनाव पर्व
डा. ईश्वरीप्रसाद गैरे सिंगो देशको धार्मिक, सांस्कृतिक प्रचलनमा अनेक पर्व र अनेक उत्सव भएझैँ राष्ट्रिय राजनीतिक प्रचलनको चुनावी प्रक्रियालाई समेत राजनीतिक पर्वका रूपमा लिन सकिन्छ। यसै सन्दर्भमा अब हुन गइरहेको
प्रेरणाका स्रोत वृद्धवृद्धाका आँसु कसले पुछ्ने ?
खेमराज निरौला मानिस एउटा निश्चित उमेर पार गरिसकेपछि शारीरिक रूपमा कमजोर हुन्छ। उसका अङ्गप्रत्यङ्गको क्रियाशीलतामा शिथिलता आउन थाल्दछ। यस्तो प्रक्रियालाई हामी वृद्धवृद्धाको अवस्था भनेर बुझ्छौं, जुन प्राकृतिक नियम पनि हो।
नव वर्षको आगमनसँगै महोत्तरीको बर्दिवास–२ स्थित मुसहर समुदायको रहन–सहन फेरिएको छ । बस्तीमा रहेका ५० भन्दा बढी विपन्न परिवारलाई नयाँ घर हस्तान्तरण गरेसँगै त्यहाँका बासिन्दाको मुहारमा खुसी छाएको छ ।
भाषा–साहित्यको दायित्व बोक्दै रामप्रसाद
मोहन दुवाल नेपाली साहित्यिक क्षेत्रमा गच्छेअनुसारको स्फूर्ति बोकेर आफ्नो दायित्व निभाइरहेका रामप्रसाद पन्त चिनाइरहनुपर्ने नाम होइन। सरकारी सेवामा नोकरी बजाएर बचेको समय जोहो गरी साहित्यिक सिर्जना र साहित्यिक पत्रिकाको सम्पादन
नववर्षको उत्साह स्थिर रहला त ?
सुशील देवकोटा देश अर्को एउटा नयाँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ। नयाँ वर्षको प्रारम्भसँगै शुभकामना आदान–प्रदानको लर्को लागेको छ। यो क्तमले थप केही समय निरन्तरता पाउनेछ। तर जनता जुन उत्साहका साथ